सङ्घीयतामा स्थानीय तह व्यवस्थापन र चुनौतीहरू | गृहपृष्ठ
Home अर्थान्तर सङ्घीयतामा स्थानीय तह व्यवस्थापन र चुनौतीहरू
on: १२ जेष्ठ २०७४, शुक्रबार १०:१६ अर्थान्तर
लोकतन्त्र र स्थानीय
श्यामकृष्ण भुर्तेलको जन्म २००७ साल मङ्सिरमा इलाम नगरपालिकामा भएको हो । उनले अमेरिकाबाट विसं. २०३८ सालमा कूटनीतिक इतिहास र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन र अनुसन्धानलगायत काममा सक्रिय रहँदै नेपालको स्थानीय लोकतन्त्र र विकेन्द्रीकरणको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका पक्षमा विभिन्न दायित्वको निर्वाह गरेका उनले यूएनडीपीको वरिष्ठ अन्तरराष्ट्रिय स्थानीय स्वशासन र विकेन्द्रीकरण विज्ञका रूपमा १० ओटाभन्दा बढी मुलुकमा काम गरिसकेका छन् । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको पूर्वसदस्य उनी सिभिक एलाइन्स फर लोकल डेमोक्रेसीको अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन् ।
सङ्घीयताको चुनौती र राजनीतिक दलको भूमिका
नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यको शासकीय स्वरूपमा नै परिवर्तन ल्याएको छ । राज्यको केन्द्रीकृत शक्ति तीन तहका सरकारमा बाँडिएको छ । त्यसरी बाँडिएका तहमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय हुन् । संविधानले परम्परागत सङ्घीयताभन्दा पृथक् किसिमले अधिकार बाँडेको छ । तीन तहको सरकारले सहकारिता, सहशासन र समन्वयमा आधारित सङ्घीयताको कल्पना गरेको छ । नेपालको सङ्घीयता भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलियाको ढाँचाभन्दा फरक र ब्राजिलजस्ता मुलुकको ढाँचामा मिल्ने खालको छ । नेपालको सङ्घीयताको ढाँचा अन्य मुलुकको जस्तो तहगत बन्दोबस्त छैन । प्रत्येक तहलाई संविधानले नै व्यवस्थित गरेको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ८ ले आआफ्नो अधिकार प्रस्तावित गरेको छ । राज्यले कसरी अधिकार दिँदै छ भन्ने विषय संविधानमै व्यवस्था छ ।
सरकारले नागरिकको सेवा प्रवाहमा राज्यको अग्रभाग (फ्रण्ट लाइन सर्भिसेज)मा नै पाउने गरी जिम्मेवारी दिएको छ । राज्यको रूपान्तरणको अनुभव र सेवा नागरिकले सहजै स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाइएको छ । अहिले तहहरूलाई दिइएको अधिकार र रूपान्तरणको बन्दोबस्त आफैमा सहज प्रक्रिया भए पनि त्यो अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ । पहिलो चुनौती भनेको नयाँ रूपान्तरण प्रक्रियामा देखिनेछ । त्यसका लागि समान न्यूनतम सहमति तथा उच्चस्तरको राजनीतिक सहमति आवश्यक छ । न्यूनतम राजनीतिक सहमति अहिलेसम्म पनि भइसकेको छैन । स्थानीय तहका बारेमा मुलुक विभाजित छ । तीन तहको स्थानीय सरकारमा सहमति बनेको छैन । सङ्घीय, स्थानीय तहलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने बुझाइ पनि राम्ररी देखिएको छैन । यस विषयलाई नेपालका लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिले आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन र समान धारणा पनि रहेको पाइँदैन । सङ्घीय बुझाइमा एकरूपता छैन । कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो स्थानीय रूपमा हुने काम शुरू भएको छ । यो आफैमा प्रक्रियाको थालनी हो । तर, यो नै सम्पूर्ण होइन । स्थानीय तहमा आफैलाई सबल र सक्षम बनाएर नागरिकमा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती छ ।
स्रोतसाधनलाई कसरी सम्पन्न बनाउने भन्ने अर्को पक्ष टड्कारो छ । त्यसको व्यवस्थापकीय पक्षलाई कसरी सबल पार्ने भन्ने विषय अर्को चुनौतीपूर्ण छ । प्रशासकीय समायोजन कसरी गर्ने भन्ने अर्को चुनौती पनि छ । अर्को महŒवपूर्ण पक्ष स्थानीय लोकतन्त्र र पार्टीभन्दा माथि उठेर नागरिकहरूसँग कसरी जाने भन्ने चुनौती छ । नागरिकहरूमा अत्यन्त उच्च अपेक्षा छ । यो अपेक्षा पूर्ण भएन भने यसले कस्तो रूप लिन्छ, यी विषय राजनीतिक दलले बुझ्नु जरुरी छ । चुनौतीलाई समयबद्ध विस्तृत गर्ने हिसाबले यसरी लैजान्छु भन्ने सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति र राष्ट्रको तयारी आवश्यक देखिन्छ । यी चुनौती पूरा भएनन् भने मुलुक संवैधानिक सङ्कटमा पर्न सक्छ । यस्ता विषयलाई मिलाएर लगिएन भने पहिले राज्यभित्र जसरी अन्योल थियो, त्योभन्दा बढी अन्योल सृजना भई लोकतन्त्र र सङ्घीयताप्रति नै अन्योल सृजना हुन सक्छ । सङ्घीयताले कसलाई कहाँ पु¥याउँछ भन्ने नबुझी अरूले जे भन्छ त्यसैअनुरूप हामी चलिरहेका छौं ।
माओवादीले जातीयताको विषय र मधेशवादी दलले सङ्घीयताका कुरा उठाएको बुझिन्छ । उनीहरूले आउने परिणाम र चुनौतीको विषय सोचेनन् । संविधानको मुद्दालाई थाती राखेर संविधान आयो । संविधानको विषयलाई पछाडि छलफल गरौं, अहिले संविधान ल्याइहालौं भनेर भनियो । अहिले तराईमा जनसङ्ख्याका आधारमा र पहाडलगायत ठाउँमा भूगोलेकै आधारमा जाने विषय आएको छ । थपिएको स्थानीय तहले राज्यमा दुई किसिमले संविधानको परिभाषा गरेको छ । एकै देशमा दुई किसिमको विभाजनले झनै समस्या निम्तिन सक्छ । यसलाई राजनीतिक दलले मिलाएर लैजान जरुरी छ ।
निकाय तथा तहका फरक र चुनौती
जिल्ला विकास समिति महासङ्घ
नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसभासद्
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले दिएको अधिकार र अहिलेको स्थानीय तहले दिने अधिकारबीच कस्तो भिन्नता छ ?
त्यति बेलाको स्थानीय निकाय र अहिलेको स्थानीय तहले प्राप्त गरेका अधिकारबीच ठूलो भिन्नता छ । त्यति बेला निश्चित सार्वभौमिकता र राजकीय सत्ताको प्रयोग केन्द्रीय तहले मात्र गथ्र्याे । अहिले राज्यका तीनओटा तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेछन् । त्यति बेला स्थानीय तह केन्द्रीय सरकारका नीति, नियम र निर्देशनमा चल्ने गर्थे । अहिले आफै संवैधानिक आधिकार प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित छन् । त्यति बेला संसद्को सामान्य बहुमतबाट पारित ऐन, नेपाल सरकारले जारी गरेको नियम र निर्देशिकाबाट स्थानीय निकाय सञ्चालित हुन्थे । अहिले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानूनबमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । त्यति बेला स्थानीय निकायहरू केन्द्रीय सरकारका मातहत थिए । यति बेला स्वशासित र स्वायत्त सरकारका रूपमा स्थापित छन् । त्यति बेला विधायिकी र कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग मूलतः केन्द्रले नै गथ्र्यो । अब संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अनुसूची ८ को २२ ओटा अधिकारका विषयमा आफै नीति बनाउने र ऐन बनाउने अधिकार दिएको छ । अनुसूची ९ को १५ ओटा अधिकारमा सङ्घ र प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी कानून बनाउने अधिकार प्राप्त छ । अनुसूची ८ र ९ का विषयमा विधायिकी र कार्यकारिणी दुवै अधिकार छ । अनुसूची ८ ले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई न्यायिक अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहमा स्थानीय अदालत स्थापना गर्ने र मेलमिलाप र मध्यस्थता गर्ने अधिकारसमेत रहेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा वर्तमान संविधानको तुलनामा अधिकार सीमित थियो । जेजति अधिकार स्थानीय निकायलाई दिने भनेर लेखिएको थियो, ती अधिकारसमेत त्यही ऐनको दफा ३३, १०१, २५३ र २५७ ले नियन्त्रण गरिदिएका थिए । यी दफामा यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने थियो । त्यसो नगरेका कारण सो ऐनको करीब ८० प्रतिशत अधिकार स्थानीय निकायले अहिलेसम्म प्रयोग गर्न पाएनन् ।
केन्द्रीय तानाशाहभन्दा टोले गुण्डा धेरै खतरनाक मानिन्छ, जित्ने पक्षबाट कत्तिको खतरा हुने देख्नुहुन्छ ?
यो कुनै तानाशाही व्यवस्था होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । अहिलेका प्रतिनिधि कुनै तानाशाहले नियुक्त गरेको नभई जनताले गोप्य मतदान गरेर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि हुन् । एउटा नेपाली उखान छ ‘टाढाको देउताभन्दा करेसाको भूत राम्रो’ केन्द्रीय सरकारमा रहने मान्छेले स्थानीय जनताका आवश्यकता र समस्या बुझ्न सक्दैनन् । त्यसैका लागि पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको आवश्यकता थियो । १५ वर्षपछि जनताले आफ्ना सधैं भेटिने प्रतिनिधि पाउन थालेका छन् । यी प्रतिनिधिमार्फत जनताले आफूमा अन्तरनिहित सार्वभौमिकताको दैनन्दिन प्रयोग गर्न पाउँछन् । शासनमा अत्यधिक जनसहभागिता हुनेछ । स्थानीय र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको आभास हुन सक्नेछ । तानाशाही व्यवस्थामा जस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जसलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइँदैन । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पद्धतिबाट चल्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन प्रणाली मात्र होइन । लोकतन्त्र भनेको प्रणाली, पद्धति, प्रक्रिया र संस्कारसहितको एउटा प्याकेज हो । लोकतन्त्र भनेको आत्मानुशासनमा चल्ने प्रणाली हो । एकजना बेलायती विधिशास्त्री एभी डायसीले ‘तिमी जतिसुकै माथि होऊ तर, तिमीभन्दा माथि जहिलेसुकै पनि कानून हुन्छ ।’ भनेझैं हाम्रा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले जथाभावी होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा कानूनको शासन लागू गर्नेछन् । जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछन् । पारदर्शिता र जवाफदेही शासन गर्नेछन् । जथाभावी गर्नबाट रोक्ने शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रभावकारी व्यवस्था सञ्चालित हुनेछन् । प्रत्येक आवाजको सुनुवाइ हुने जीवन्त नागरिक समाज पनि अहिले लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा स्थानीय क्षेत्रमा उपलब्ध छन् । यस कारण पनि केन्द्रीय तहकाले भन्दा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले जनपक्षीय काम गर्नेछन् भन्ने कुरामा मेरो विश्वास छ ।
स्थानीय तहमा देखिन सक्ने विभिन्न गलत क्रियाकलापलाई रोक्न सरकार, राजनीतिक पार्टी र जनताले केकस्तो भूमिका निभाउनुपर्छ ?
स्थानीय कार्यकारिणी र न्यायिक समितिबाट हुनसक्ने सम्भावित क्रियाकलाप रोक्ने कानूनको शासन हो । शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरण हो । केन्द्रीय सरकारले जथाभावी क्रियाकलाप नगरोस् भनेर शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र पृथकीकरणको व्यवस्था राखिनेछ । त्यसैकारण केन्द्रीय सरकारले जसरी जथाभावी गर्न पाउँदैन, ठीक त्यसैगरी स्थानीय तहमा गलत क्रियाकलाप रोक्ने त्यस्तै अङ्ग हुनेछन् । महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्छ र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतले भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्नेछन् । संवैधानिक आयोगले कर्मचारीको योग्यता परीक्षण गर्नेछ । सत्तारूढ दलको घोषणापत्र, संविधान र कानूनको आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । प्रतिपक्षले ठीकसँग काम गरे गरेनन् भनेर निगरानी गर्नेछन् । राम्रा कामका लागि सबै राजनीतिक दलले सहयोग गर्नेछन् । जनताले शासनमा सहभागी भई सहयोग गर्नेछन्, गलत काम भए विरोधमा उत्रनेछन् र सच्चिन लगाउनेछन् ।
अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधिबाट अवैधानिक तरीकाले कर्मचारी भर्ना, आर्थिक अनियमितता हुन सक्छ कि ?
स्थानीय कानून नबनेसम्मका लागि केन्द्रीय सरकारले स्थानीय आवश्यकताको पूर्वानुमान गरी कर्मचारी समायोजन गर्नेछ । गाउँसभा र नगरसभाले स्थानीय कानूनद्वारा स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका शर्त र सुविधा कानूनले निर्धारण गरेबमोजिम गर्नुपर्नेछ । जथाभावी गर्न मिल्दैन । कार्यबोझको आधिकारिक रूपमा संस्थागत विश्लेषण गरी दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्ने छ । कानूनसमूह, प्रशासन समूह, प्राविधिक समूह र राजस्व समूहजस्ता समूहमा आबद्ध गरी उनीहरूको कानूनबमोजिम वृत्तिविकास र उत्तरदायी शासन सञ्चालन हुने हुन्छ । स्थानीय सरकारले निर्धारण गरेको दरबन्दी र लोकसेवा आयोगले योग्यता परीक्षण गरी सिफारिश गरेका व्यक्तिहरू मात्र नियुक्त हुने भएकाले अनियमितताका सम्भावना कम हुन सक्छन् ।
संविधानले स्थानीय तहलाई कक्षा १२ सम्म शिक्षक भर्ना, विद्यालय व्यवस्थापनलगायतको सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ, यसले समस्या ल्याउँदैन ?
नेपालको संविधानले १२ कक्षासम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण बन्दोबस्त गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । विद्यार्थीका अभिभावकले निर्वाचित गरेको घरदैलोको सरकार उनीहरूप्रति जवाफदेही हुुन बाध्य हुन्छन् । सिंहदरबारबाट जवाफ माग्न नसकिएका र जवाफ नमागिएका विषय अब स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मामा लिई सुधार गर्न सक्छ । विगतमा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत शिक्षामा अभिभावकको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको हाम्रो अनुभवले पनि यसलाई सजिलो पार्नेछ । राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्डभित्र रही अगाडि बढ्न स्थानीय सरकार सक्षम हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएर शिक्षाका क्षेत्रमा समस्या होइन, समाधान हुन्छ ।
शिक्षकले राजनीति गर्ने र विद्यालयमा नपढाउने गरेको विषय चर्चामा छ, यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह हुँदा यसको समाधान हुन्छ कि झन् धेरै समस्या निम्तिन्छ ?
शिक्षकले राजनीति गर्न मिल्दैन । राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित भएको अवस्थामा शिक्षकका माध्यमबाट राजनीति अगाडि बढाएको विगतको विरासतले अझैसम्म पनि पछ्याएको छ । स्थानीय सरकारले १२ कक्षासम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिँदा उनीहरू शिक्षकलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिप्रति जवाफदेही बनाउन बाध्य हुन्छन् । कुनै स्थानीय सरकारले चलाएको विद्यालयको शैक्षिकस्तर नराम्रो भई अर्को स्थानीय सरकारले चलाएको विद्यालयमा जाने परिस्थिति सृजना भएमा यसले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न ठूलो दबाब सृजना गर्छ । यसले शिक्षकलाई जवाफदेही बनाउन बाध्य पार्छ । यो जवाफदेहिता राजनीति गरेर पूरा नहुने भएकाले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन बाध्य हुन्छन् ।
स्थानीय तह जित्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई शिक्षक नियुक्ति गर्ने देखिन्छ । यसको समाधान के हुन सक्ला ?
स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले शिक्षकका रूपमा राम्रा व्यक्ति ल्याए मात्र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सक्छन् । त्यसका लागि शिक्षकको लाइसेन्ससम्बन्धी जाँच सङ्घ र प्रदेश सरकारको संयुक्त बन्दोबस्तीमा मिलाउने र शिक्षकको उपयुक्तताको परीक्षण पनि प्रादेशिक शिक्षक सेवा आयोगबाट गर्ने र यसको नियुक्ति स्थानीय सरकारले गर्ने हुँदा राम्रो व्यक्तिलाई नै हाम्रो व्यक्ति बनाउन स्थानीय सरकार बाध्य हुन्छ ।
शिक्षक भनेको देशको महत्त्वपूर्ण र बौद्धिक वर्गअन्तर्गत पर्छन् । यस्ता वर्गलाई राजनीतिमा लागेर पेशाप्रति गैरजिम्मेवार बन्ने बाटोलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रले रोक्ला ?
स्थानीय सरकारको नेतृत्वले नै स्थानीय तहको राजनीति गर्छ । उनीहरूले विकास, समृद्धि, दक्षता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता र समताको राजनीति गर्छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षकले सिकाइ उपलब्धिमा सुधार गर्ने, गुणस्तर बढाउने, विद्यार्थीको सृजनशीलतालाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यमा लाग्न स्थानीय सरकारले उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । शिक्षकलाई उनीहरूको उपलब्धिप्रति जवाफदेही बनाउनेबित्तिकै शिक्षण कार्यमा नै सम्पूर्णरूपमा आफ्नो शीप र जाँगर खर्च गर्न बाध्य हुन्छन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्र्फत व्यवस्थापन गरिएका कतिपय विद्यालयले निकै राम्रो गरेको विगतको अनुभव जनप्रतिनिधिले लिन सक्छन् । ती विषयलाई संस्थागत गरी स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउन सकेमा त्यसको राम्रो उपयोग हुन सक्छ । विद्यार्थीहरूका अभिभावकसमेत संलग्न भएको सरकारले उनीहरूले पढ्ने विद्यालयको राम्रो व्यवस्थापन नगरेमा अरू कसले गर्ला र ? त्यसैले स्थानीय सरकारमा पूर्ण भरोसा गरी उनीहरूलाई अगाडि बढ्न प्रोत्साहित गर्नु अवश्यक छ ।
संविधानमा स्थानीय सरकार र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास
सङ्घीय शासन विज्ञ तथा अधिवक्ता
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न आधा शताब्दी अघिदेखिको नेपाली जनताको चाहना २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएसँगै पूरा भएको छ । लिखित संविधानको क्रममा ७औं संविधानको रूपमा नेपालको संविधान लागू भएको छ । संविधानले २ सय ४७ वर्षदेखि अभ्यास हुँदै आएको केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरण गरेको छ । संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधानले विश्वकै कान्छो संविधानको इतिहास रचेको छ ।
निरन्तरको संवैधानिक अस्थिरता खेपेको नेपालका लागि संविधानसभाबाट दिगो संविधान बनाउनु आफैमा चुनौतीपूर्ण थियो । संविधान बनाएर मात्र पुग्ने अवस्था थिएन । राज्य व्यवस्थाको लोकतन्त्रीकरण र जनताका तहमा अधिकार पुर्‍याउनुपर्ने माग जबरजस्त थियो । यसअघि बनेका संविधानमा स्थानीय शासनका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा स्थानीय निकायहरूलाई केन्द्रीय सत्ताको सहयोगी निकायका रूपमा प्रयोग गर्ने राजनीतिक संस्कार कायम थियो । अतः संविधान निर्माणको चरणमा आइपुग्दा स्थानीय सरकारको स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूति गर्नुपर्ने मुद्दा स्थापित भइसकेको थियो । फलतः नेपालको संविधानले समकालिक विश्वका संविधानको सापेक्षतामा स्थानीय सरकारसम्बन्धी उल्लेख्य व्यवस्था गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई सङ्घीय एकाइका रूपमा व्यवस्था गर्दै स्थानीय तहमार्फत समेत सार्वभौमसत्ता र राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने कुराको प्रत्याभूति गरेको छ । स्थानीय सरकारसम्बन्धी यस्तो व्यवस्थाबाट संविधानवादमा एक नयाँ आयाम थपिएको छ । आगामी समयमा यसको प्रभाव विश्वका अन्य संविधानमा समेत पर्नेछ ।
स्थानीय सरकार जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क र पहुँचमा रहने जनताको घरदैलोको सरकार हुन् । स्थानीय विशिष्टता, जनताको रुचि, चाहना, माग र प्राथमिकताका विषयमा स्थानीय सरकार बढी जानकार हुन्छन् । लोकतन्त्र र शासन व्यवस्थाको अभ्यासलाई सिक्ने तथा नेतृत्व विकासका लागि पहिलो पाठशालाका रूपमा रहने हुँदा स्थानीय सरकारको आजको नेतृत्व नै भोलिको प्रदेश/केन्द्र सरकारको दाबेदारका रूपमा रहन्छन् । स्थानीय सरकारको यही विशेषताका कारण पनि आधुनिक लोकतन्त्रमा स्थानीय सरकारविनाको शासनको कल्पना विरलै हुने गरेको छ र स्थानीय सरकारको संवैधानिक प्रत्याभूतिको जनचेतना दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
सन् १९९० को दशकपछि संविधानबाटै स्थानीय स्वायत्त सरकारको प्रत्याभूति गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन बढ्दै गएको छ । छिमेकी मुलुक भारतले सन् १९९३ मा संविधानमा ७३औं र ७४औं संशोधन गर्दै नगरपञ्चायत र ग्राम पञ्चायतको व्यवस्था गरेको छ । पोल्याण्ड (१९९७), म्यासेडोनिया (१९९२), युगाण्डा (१९९५), स्लोभाकिया, चेज रिपब्लिक, नामिबिया (१९९८), केन्या (२०१०), दक्षिण अफ्रिका (१९९६), ब्राजिल (१९८८) रसिया (१९९३), स्वीट्जरल्याण्ड (१९९८), आदि देशले संविधानबाटै स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेका छन् । अमेरिका, अष्टे«लिया, क्यानडा, डेनमार्क, स्वीडेन, बेलायतजस्ता लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरेका र स्थिर राजनीतिक प्रणाली भएका देशमा व्यवहारबाटै अधिकार र जिम्मेवारी सम्पन्न स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकारको विश्वव्यापी संस्था युनाइटेड सिटिज एण्ड लोकल गभर्नमेण्ट र यूरोपेली युनियनले स्थानीय सरकारसम्बन्धीे सिद्धान्तको वकालत तथा लागू गर्दै आएका छन् ।
कुनै पनि संविधान आफैमा पूर्ण हुँदैन, त्यसका प्रयोगकर्ताले यसमा जीवन प्रदान गर्छन् । आगामी दिनमा स्थानीय सरकारमा आउने नेतृत्वको सफलतासँगै स्थानीय शासनको हाम्रो अभ्यास थप निखारिँदै र परिष्कृत हुँदै जानेछ । स्थानीय सरकारको संवैधानिक व्यवस्था राम्रो हुँदैमा शान्ति, समृद्धि तथा देश र जनताको समग्र विकास स्वतः हुन्छ भन्ने पनि छैन । संविधानको भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने अभिभारा यसको प्रयोग गर्ने नेतृत्वमा रहेको छ ।